» कोरोनाबाट नआत्तिनुस्, विज्ञ भन्छन् – ८५ प्रतिशत संक्रमितलाई सिटामोल खाएरै निको हुन्छ
विदेशबाट हेटौंडा आएका ११ सहित १७ जनाको नमूना परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ
हेटौंडा अस्पतालको छुट्टै कोठामा ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन
लकडाउन प्रभावित परिवारलाई मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीको राहत
लकडाउन वैशाख ३ गतेसम्म थप गर्ने सरकारको निर्णय
मोबाइल एप सञ्चालनमा
कोरोनाबाट नआत्तिनुस्, विज्ञ भन्छन् – ८५ प्रतिशत संक्रमितलाई सिटामोल खाएरै निको हुन्छ
१० चैत्र २०७६, सोमबार ०८:४०
विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको त्रास बढ्दै गइरहेको छ ।
विज्ञहरूले कोरोना भएको पहिचान गर्नका लागि विभिन्न आधारहरू बताउँदै आएका छन् । कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था वा कोरोनाको लक्षणबारे जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। रविन्द्र पाण्डेले दिएका सुझाव हेर्नुहोस् :
कस्तो अवस्थामा कोरोनाको परीक्षण गर्ने ?
– अचानक १०२ डिग्रीभन्दा धेरै ज्वरो आएमा
– सुख्खा लहरे खोकी लागेमा
– सास फेर्न निकै गाह्रो भएकोमा
– छातीको एक्स रे गर्दा निमोनियाको लक्षण देखिएमा
– एकदम थकाइ लागेमा
कुन अवस्था मौसमी फ्लु हो ?
– रुघा लागेमा
– नाक बन्द हुने वा नाकबाट पानी आइरहेमा
– मन्द ज्वरो आएमा
– सामान्य खोकी लागेमा
– हाच्छ्युं आइरहेमा
– हल्का शरीर दुखेमा
यस्तै डा। पाण्डेले कोरोनालाई लिएर नआत्तिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कोरोना कमजोर भाइरस भएको भन्दै उनले घरमै सामान्य उपचारले पनि ८५ प्रतिशत संक्रमितलाई ठिक हुने बताएका छन् । उनले कोरोनाको बारेमा केही तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छन्, ति हुन्ः
– आत्तिने नगरौं, कोरोना कमजोर भाइरस हो । ८५ प्रतिशत व्यक्तिलाई सामान्य लक्षण देखिएर निको हुन्छ । घरमै बसेर, झोलिलो खाना खाएर तथा सिटामोल खाएर निको हुन्छ ।
– बाँकी १० प्रतिशतलाई अस्पतालमा केहि दिन बस्नुपर्ने हुन्छ । केहिलाई गम्भीर अवस्था हुन्छ तर निको हुन्छ । २/३ प्रतिशतको मात्र मृत्यु हुन्छ । यो २/३ प्रतिशत मृत्यु हुने धेरै रोगहरू छन् । लोकान्तरको सहयोगमा
१० लाखलाई संक्रमण, ५३ हजारको मृत्यु, २ लाख निको भए
उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधासम्पन्न होटलमा
पैदल हिँडेर हेटौंडा आइपुगेका १५० जनालाई निःशुल्क खाना वितरण
हेटौंडाको क्याम्पा डाँडामा पुरुषको शव फेला
मकवानपुरमा १३ वर्षीया किशोरी मृत भेटिइन्
गलत रिपोर्टका कारण विजयको मृत्यु, कारवाही र क्षतिपूर्ति माग
मेयर महत मार्फत् हेटौंडा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामाग्री
सङ्क्रमित युवतीलाई घरसम्म पुर्याउने चालकको पहिचान
मनकारी ध्रुव अधिकारीः तीन हजारलाई खुवाए खाजा र पानी
लकडाउन एक साता थप्ने सरकारको तयारी